ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 99W, တောင်တရုတ်ပင်လယ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း 02B
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မုန်တိုင်းသတင်း 02B, 90W, Bay Of Bengal, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည်ရ မုန်တိုင်း 02B အိန္ဒိယသို့ ဦးတည်
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မုန်တိုင်းသတင်း 02B, 90W, Bay Of Bengal, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
By mmweather.ygn, on October 20th, 2012%
အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ၇ရှိသည့် NRL data များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ဘက်-သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်၊ လက္ကာဒိုက်ပင်လယ်(Laccadive Sea)တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B သည် အားကောင်းလာသည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် တောင်ပိုင်း Madurai မြို့တောင်ဘက် မိုင်၉၀ ခန့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မြို့တော် ကိုလံဘို အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၁၆၀ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၉ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ဘွယ်ရှိ/မရှိနှင့် တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95B ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 95B, LPC, လေဖိအားနည်းဆဲလ် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်နှင့် မိုးလေဝသ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on June 8th, 2012%
ဇွန်လ ၈ ရက် မနက် – ၇ နာရီခွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံအရ ကပ္ပလီပင်လယ်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်း၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တောင်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသတွေပေါ်မှာ တိမ်ထုစုဖွဲ့မှု အား ဆက်လက်ကောင်းနေဆဲဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။(ပုံ-၁)
မနေ့က(ဇွန်လ ၇ ရက် ညနေပိုင်းမှာ) သုံးခွ မြို့နယ်၊ တံတားမြို့ဘက်မှာ လေပြင်းတိုက်ပြီး မိုးရွာတဲ့ အတွက် အိမ်အမိုးတွေ၊ စလောင်းတွေလန်ပြီး တချို့ အင်တင်နာ တိုင်တွေ ကျိုးကုန်တယ်၊ သစ်ကိုင်းတွေ ဓါတ်ကြိုးပေါ်ကျလို့ အခုထိ လျှပ်စစ်မီး ပြန်မရသေးဘူးလို့ ကြားရပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက်လဲ Windshear Chart အရ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ တစ်နာရီမိုင် ၂၀ မှ ၃၀ . . . → Read More: မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်နှင့် မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးရေချိန်-ရေကြီးမှု ခန့်မှန်းခြေ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှု ပိုလာနိုင်
By mmweather.ygn, on June 7th, 2012%
အောက်ဖေါ်ပြပါ Global Tropical Hazards Outlook မှ ဇွန်လ ၆ ရက်-ဇွန်လ ၁၆ ရက် အတွင်း ရာသီဥတု ခန့်မှန်းဖေါ်ပြသည့် ပုံ အရ ဇွန်လ ၁၃ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၆ ရက် အတွင်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း(ဖိလစ်ပိုင်အရှေ့ပင်လယ်)နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အရှေ့ပိုင်း(မက္ကဆီကို အနောက်ဘက် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်) တို့တွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း တွေရှိရပြီး၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့် ထိစပ်လျှက်ရှိသည့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ဖေါ်ပြပါ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်အတွင်း ပုံမှန်မိုးရေချိန်ထက် ပိုမို ရွာသွန်းဘွယ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ (ပုံ-၁)
ဇွန်လ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀၃၀ နာရီတွင် . . . → Read More: မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှု ပိုလာနိုင်
One comment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ ကပ္ပလီပင်လယ်, တိမ်ထုစုဖွဲ့မှု အခြေအနေ, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် ဇွန်လ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၂း၃၀ နာရီခန့်မှ စတင်၍ တိမ်တိုက်စုဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်မှု အားကောင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနေပြီး၊ တိမ်တိုက်အရွယ်အစား အချင်း မိုင် ၅၀၀ ခန့် အထိ ကြီးမားနေကြောင်း နံနက် ၀၆း၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံတွင် တွေ့ရပါသည်။ ၄င်း တိမ်တိုက်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပါသည်။ လေဖိအားနည်းဆဲလ် (Low Pressure Cell) ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေမရှိပါ။
ဂျပန်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း MAWAR သည် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ လျော့သွားပြီး ဂျပန်ပင်လယ်၌ အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်း – အာရေဗျပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် . . . → Read More: မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ ကပ္ပလီပင်လယ်, တိမ်ထုစုဖွဲ့မှု အခြေအနေ, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR နှင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းမှ တိမ်တိုက်များ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on June 3rd, 2012%
Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to becomeaCategory . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR နှင့် မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းမှ တိမ်တိုက်များ အခြေအနေ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ, မုန်တိုင်းသတင်း 04W, 95W, AMBO, FOUR, MAWAR, တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက် မုတ်သုံဝင်ရောက်ချိန်နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on May 20th, 2012%
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသို့ မုတ်သုံဝင်ရောက်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှု စတင်ချိန်တွင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ တောင်ပိုင်း အာရေဗျပင်လယ်၊ Madagascar ကျွန်း မြောက်ပိုင်း၊ တောင်လတ္တီတွတ် ၁၁ ဒီဂရီ ခန့်၌ မေလ ၁၉ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲမှ စတင်၍ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 97S ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ အာရေဗျပင်လယ်မှ 97S 19 May 2012 1200Z Location: -10.5 49.2 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏ တောင်ပိုင်းမှာရော၊ မြောက်ပိုင်းမှာပါ – အာရေဗျ ပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်း၊ မြန်မာ့ . . . → Read More: မုတ်သုံဝင်ရောက်ချိန်နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ အခြေအနေ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ SST, ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ်, အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် တိမ်ထုစုဖွဲ့မှုများအားကောင်းလာ
By mmweather.ygn, on May 4th, 2012%
MMW Blog Mobile Link . . . → Read More: မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် တိမ်ထုစုဖွဲ့မှုများအားကောင်းလာ
Leaveacomment ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ ကပ္ပလီပင်လယ်, တိမ်ထုစုဖွဲ့မှု, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum